3 Sha'aban 1439 H
Ingriiska Oo haystay Wuqooyiga Soomaaliya (Somalilan)
Waxay wada leeyihiin dhaqan iyo luqad Ay wadaagaan. Somalida waxay ku kala nool yihiin, qurbaha iyo dhulka Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliweyn . Soomaalida badankooda waa dad reer guuraah ah, waxaana lagu yaqaanaa, xoolo dhaqasho, sida ariga iyo geela iyo Lo'da. Soomaalida waxay ahaayeen dad ku dagaalama daaqqa xoolaha iyo Biyah. Dadka soomaaliyeed waxaa dibadda uhaajiray ku dhowaadb ilaa iyo 5 Malyan. maadaamaa dalku ku jiray in kabadan 20 sano oo dagaal ah, Dhanka diinta soomaaliya waxaa aad awood ugu leh suufinimada suufiyada soomaali xoogaa waa ka duwan yihiin suufiyada dalalka qaarkood inkastoo ay aqoonta diintuu ay sii yaraanayso. (SII AQRI)
Taariikhdu Maata Waa 18 Abriil 2018 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Kalsan TV - Oo ku soo biiray TVda Soomaalida kaasoo la furay maanta.
Garoonka Muqdisho - Laba diyaaradood oo nooca rakaabka qaada ah ayaa isku dhacay iyagoo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Laas Geel Waa goob taariikhi ah oo ilaa hadda ay kamuuqdaan qoraaladii iyo sawiradii lagu sawiray kahor taariikhda.waxa ay magaaldani kutaalaa duleedka magaalda Hargaysa, waxaa lagu qiyaasaa in sawirada iyo waxayaabaha taariikhiga ah ee yaala magaalada Las geel ay yihiin ilaa 10.000 oo sano ka hor dhalashadii Ciise.
soomaalidoo dhan waa dhibkeed:
(1).Inta dhigeyga meel dhigtaan dheeraad rabaahu waa dhibkeed
(2.)Dhibya xumoon dhamaad leheyn abaal ladhaamo waa dhibkeed
( 3).Dhaqanya marti dhowrideed in lagu dheelo waa dhibkeed
(4.)Dhulkaaga igusoo dhaweey dhaxalna sheego waa dhibkeed.